Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. इराकमा जारी सरकार बिरोधी प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुग्यो – Emountain TV
इराकमा जारी सरकार बिरोधी प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुग्यो
एजेन्सी, १८ असोज । इराकमा आधारभूत सेवा र रोजगारीको अवसर कम भएको भन्दै सरकारबिरुद्ध गरिएको बिरोध प्रदर्शनका क्रमका मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुगेको छ ।
गत बुधवारदेखि शुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि राजधानी बग्दाद लगायतका शहरमा कफ्र्यू आदेश गरिएको थियो । तर त्यसको पर्वाह नगरी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
विगत चौबिस घण्टामा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप बढेकाले मृत्यु हुनेको आंकडा दोब्बर हुन सक्ने जनाइएको छ । आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि जथाभावी आक्रमण बढेको अधिकारीहरुले दावी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री आदेल अब्देल महदीले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न चाहेको बताएपनि आन्दोलन सकिएको छैन । प्रदर्शनकारीले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा गरिबी बढेको भन्दै सार्वजनिक सेवाको समेत विरोधसमेत गरेका छन् ।
आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेर मानवअधिकार हनन् गरेको अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले रबरका गोली प्रहार गर्दा कयौं आन्दोलनकारी घाइते भएका बताइएको छ । मानव अधिकारवादी संस्थाले शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रसमेत गरेका छन् ।